Jaamacada Lund oo diiday in ay la shaqayso jaamacadaha Somalia | Somaliska
Jaamacada Lund oo ka mid ah jaamacadaha ugu caansan Sweden ayaa dhawaan waxay bilowday wadashaqayn ay la samaynayso jaamacado badan oo ku yaala Afrika balse markii loo soo bandhigay in ay wadashaqayn la gasho jaamacada Golis ee ku taala Hargeisa ayay diideen, iyagoo aan muujin wax xiiso ah.
Mubarak Abdirahman oo xiriirka la sameeyay jaamacada Lund, isla markaana ka mid ah dadkii horey wax uga bartay jaamacada Lund ayaa sheegay in ay nasiib daro tahay in albaabada laga xirto jaamacadaha Somalia, iyadoo aan xitaa la siin fursad ay ku soo bandhigaan waxqabadka jaamacada Golis.
Pär Svensson oo ah qabiir ka tirsan jaamacada Lund oo ka jawaabay eedeynta Mubarak ayaa sheegay in Somalia aysan ku jirin wadamada ay muhiimada siinayaan, isla markaana aysan doonayn in ay wadashaqayn cusub la furaan. Waxaa uu intaas ku daray in aysan jaamacadaha Somalia haysan fursad dhaqaale isla markaana ay liidato xaalada amaanka.
Mubarak ayaa dhinaca kale, ku guuleystay in uu abuuro wadashaqayn ka dhaxaysa jaamacada Golis iyo jaamacada Malmö Högskolan, kuwaasoo uu ku tilmaamay in ay si fiican ula kulmaan, isla markaana ay wada abuureen wadashaqayn xaga maktabada ah.
mulaaxo cadey says:
Waa arin laga naxo runtii. Wada shaqeynta jaamacada Lund.
Iyo golis marka hore waa inaad adiga is hormarisaa.Waana inaad tayada waxbarashada sare u qaadaa.Markaas adigaa laguu baahanayaa.
Waxa lagu diiday meel anay Dawlada fadaralku xukumin ayay odhanayan waa Somalia.dadkani way idinka horeyan meeshu waa Somaliland.
waxaa qasaaray kuwii u codeeyay midka mubaarak la leeyahay ee u fududeeyay inuu xubin ka noqdo golaha malmö cadeyn codadka uu helay kama eesan wada imaan hargeisa ee somali isku dhaf ah baa ku taageertay in uu xubin ka noqdo golaha Malmö taas badalkeeda xoogiisu waxuu saaray in uu hal jaamacad ku xiro jaamacado badan isku daygiisa koowaad waxuu noqday inuu isku xiro jaamacada Golis faraceeda hargeisa iyo högskolan ka Malmö good ma xuma waa arin fiican laakin waxee ahayd isku daygiisa labaad in uu ka dhigo Lund university iyo jaamacad kale oo ku taala mid ka mid ah magaalooyinka waa weyn ee dalkeena balse taas badalkeeda waxuu isku dayay in uu hal magaalo un u shaqeeyo marka waxaan leenahay ninka Mubaarak la leeyahay sxb bahasha xoogoo cusbo u yeel waayo waxaa dad weynaha oo idil u muujisay in aad 1 magaalo aad u daneeneesid balse dadka aad magacooda meesha ku fadhisid waa Soomaali oo idil codkoodana ku siiyeen sidaa ula soco W.B.T
Mubarik Abdirahman says:
Abdinasir, Walaal aniga waxa ii doorteey Somali aad iyo aad uu badaan oo ka soo jeeda Somalia oo dhan. Aniga waxa ii saraan wajib aad uu weeyn siida aan uuga shaqeen laha hormariinta dadkii ii doorteey. Anigu shaqadeeydu waxeey ku eegtahaay Malmö iyo Sweden.
Gollis University waa jamacaad ku talaa meel eey somalidu eey dagaan yihin, iiyaga iila soo xidhidhay oo iigu yimi magalada Malmö. Aniga wajib baa ii saaran iin aan qolo kasta oo ila soo xidhidha iin aan caawiyo wixi aan ku cawinkaraayo. Lakin anigu maa raadinaayo xidhidhada noocas madama aniga shaqadeeydu ku eegtahaay Malmö.
Waxa nasib daro ah iin aad soo qortiid koment adigo aan hubsan. Somalidu wexey ku mahmahaan ”Hubsiimo Hal ba la siista”
Xildhiban Mubarik Mohamed Abdirahman
Abdi xaafid says:
Xildhibaan Mubarik Mohamed A.rahman Sxb waxaan kuwaydiin lahaa Arintii Shanta sano ee sharciga weyn waa tii aad howsheeda Wadee maxaa kuu hagaagay??? Hawshaas xagay maraysaa ? Mase loo ogoaaday Somalida inay shan sano kuqaataan sharciga weyn?
wixi lagu diday ayee qabaan wadan an dowlad lahay sidi lagu so dhaweyo waa adag tahay
Walaal, hawshu sii fiican beey uu soocota. Lakin waa hawl waqti dheer qadaneeysa oo processku maa fududa. Laakin Socialdemokratia reer Malmö weey ansixiyeen moshankeeygi ahaa iin Somalida iyo dadka kale ba looga dhigo 5 sano. Waa iin lakin xisbiga oo dhaan laga dhadhiciyo, kadibna barlamka la dhexdhiga oo markaasna la ansiixiyo. Waa hawl shaqo badaan uu bahaan. Laakin anigu waxa ka soo dhameeeyey iin eey Malmö iyo Skåne eey iiga aqbala moshankaa oo aan qoray.
xildhibanka af somaaali fiican mayaqaano caadi maaha,xilidhiban go back to school and study somali language fadhlan .
April 16, 2015 at 23:06
Xildhibanka adow kaa qatarsanyahay lär dig somaliska Nej fadhlan men ja Fadlan. Meesha waa leysku helay